China China Ishaja yefowuni ,tshaja iMicrosoft fowuntshajaja, umboneleli wetshaja enye yefowni ye-USB
Inkcazo:Ishaja yefowuni ye-USB,Mini Ishaja yefowuni yakho,Ishaja yokuhamba kwefowuni ephathekayo ye-USB,Ishaja yefowuni enye ye-USB,,
Home > Imveliso > Ishaja yefowuni ye-USB
Iintlobo zeMveliso ze- Ishaja yefowuni ye-USB , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Ishaja yefowuni ye-USB , Mini Ishaja yefowuni yakho ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-5V 2A Ishaja enentambo yeZinto zasekhaya  Qhagamshelana Ngoku
Iphi i-5V2.1A 2USB Ishaja yokuHamba  Qhagamshelana Ngoku
Indawo eyodwa ye-Port QC3.0 QC2.0 Ishaja yodonga  Qhagamshelana Ngoku
I-5V 2A Ishaja enentambo yeZinto zasekhaya
Packaging: Ingxowa yePP + ibhokisi yeCarton
I-5V 2A Ishaja enentambo yeZinto zasekhaya I-5V 2A Ishaja enentambo yeNkcazo yeMpahla yaseKhaya : 1. Imveliso inokuphatheka kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa, inokusetyenziswa zezixhobo ezincinci zasekhaya. 2.2m ubude bayo, i-DC plug szie...
Iphi i-5V2.1A 2USB Ishaja yokuHamba
I-5V2.1A 2USB Ishaja yokuHamba Ii-5V2.1A ii-2-USB Ishaja eNtsha yeNgcaciso: 2 Itshaja yokuhamba nge-USB kunye netekhnoloji ye-Smart IC, ungonwabela ukutshaja kwe-desktop ekhaya kunye naseofisini, ubiza izixhobo ezi-2 ze-USB ngexesha elinye. 1...
Indawo eyodwa ye-Port QC3.0 QC2.0 Ishaja yodonga
Indawo eyodwa ye-Port QC3.0 QC2.0 Ishaja yodonga Iinkcazo zeShaja yeWall Street enye: Uyilo lwethu lwe-mini QC3.0 uyb ngetshaja ilungile kakhulu kwaye inobubele. I-QC 3.0 yitekhnoloji yokulandela i-QC 2.0 kwaye ikhawuleza ngokukhawuleza...
KwiChina Ishaja yefowuni ye-USB Abaxhasi
Ishaja yefowuni ye-USB yitshaja yomnxibelelanisi kunye nezibuko le-USB / izibuko kunye nentambo ye-USB enokutsalwa. Kolu hlobo lwe-adaptha yetshaja ye-USB, ungabiza i-ipad / ikhamera / isithethi sakho seBluetooth / ibhanki yamandla, njl. Njl. Ngentambo ye-USB, ilula kakhulu. Kukho itshaja eyi-1-USB ,tshaja eyi-2-USB ,tshaja eyi-3-USB, 4-USB charger, 5-USB ishaja, 6-USBtsha, ukuvumela ukuba ubize ngaphezulu kwesixhobo esinye se-USB.
Ishaja yefowuni ye-USB Mini Ishaja yefowuni yakho Ishaja yokuhamba kwefowuni ephathekayo ye-USB Ishaja yefowuni enye ye-USB I-5V1A Ishaja yefowuni ye-USB